🥇 ▷ Beddelka Wunderlist | 7 barnaamijyada ugu wanaagsan ee lagu sameeyo waxqabadka Android ✅
Beddelka Wunderlist | 7 barnaamijyada ugu wanaagsan ee lagu sameeyo waxqabadka Android
Liiska hoosaadku wuxuu u adeegay sidii barnaamijyada liistada ee barnaamijyada wax-qabad ee ugu wanaagsan sannado badan. Waxaa helay shirkadda Microsoft sanadkii 2015 oo hadda shirkaddu waxay go’aansatay inay xidho Wunderlist sababtoo ah shirkad u gaar ah oo la yiraahdo Microsoft To Do.
Dadku waxay durba bilaabeen inay raadsadaan bedellada Wunderlist isla marka ay ogaadaan inuu appku soo dhowyahay. Waxyaabo badan oo Wunderlist ah ayaa laga heli karaa Google Play Store si aad uga doorato. Si kastaba ha noqotee, helitaanka liiska barnaamijyada ugu wanaagsan ee la-qabanayo waa hawl lafteeda iyada oo ay ugu wacan tahay tirada xulashooyinka la heli karo.
Dadka badankood waxay raadinayaan barnaamij soo bandhigaya astaamaha saxda ah ee nooca bilaashka ah ama kan xayeysiiska ah. Marka, halkan waxaan sameynay liis 7 ka mid ah Wunderlist baddalka loogu talagalay Android ee maareynta hawsha.
Beddelka ugu fiican ee Wunderlist: codsiyada hawsha loogu talagalay Android
Microsoft inay sameyso
Zenkit In La Sameeyo
Barnaamijka Google ee Hawlaha Google wuxuu u noqon karaa badalka wanaagsan ee Wunderlist. Isticmaalayaashu waxay abuuri karaan howlo kala duwan iyo qoraallo hoosaadyo kala duwan oo leh tilmaamaha ku habboon. Waxa kale oo jira ikhtiyaar lagu go’aamiyo taariikhda la filayo in la dhammaystiro hawlaha waaweyn iyo calaamad hoosaadyada oo la dhammaystiro markii la dhammaystiray dalabka liistada la sameeyo.
Hawlaha Google, waxaad ku abuuri kartaa liisas fara badan oo aad rabto maxaa yeelay app-ku ma laha wax xadidan. Codsiga wuxuu leeyahay mid aad u fudud oo sahlan in la isticmaalo interface. Si kastaba ha noqotee, fududeynteeda awgeed, Google Tasks waxay lumisaa sifooyin runtii muhiim ah oo laga heli karo barnaamijyada kale ee lagu xusay liiska.
Qiimo – Bilaash
Abuur oo dib u eeg qoraalada isla markaaba
Si toos ah ugu samee hawlo emayl ah
U qaybi hawlo tiro ku habboon oo tiro-hoosaadyo ah
Ku fiiri howlahaaga emaylka.
laba. Microsoft inay sameyso
Microsoft To Do waxaa loo yaqaan karaa mid ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee laga beddeli karo Wunderlist maadaama ay la socoto aaladaha qorsheynta maalinlaha ah. Mid ayaa u adeegsan kara app-ka inuu abuuro qoraalo, liisaska dukaamaysiga, u qorsheeyaan dhacdooyinka, iyo dejinta xusuusiyeyaasha howlaha kala duwan.
Users sidoo kale ku dari kartaa emojis, dalban karaan hab mugdi ah, iyo mowduucyo midabo liisaska. Microsoft To Do waxay kaloo u oggolaaneysaa dadka isticmaala inay la wadaagaan liisaska asxaabtooda, asxaabtooda, iyo qoysaska si ay ugu sii xirnaadaan socodka.
App-ka ayaa sidoo kale la yimid isku-darka Microsoft 365 kaas oo adeegsadayaashu ay ku dhejin karaan liiska u dhexeeya Microsoft To Do iyo Muuqaalka. App-ka ayaa loo heli karaa dhammaan aaladaha waaweyn oo ay ka mid yihiin macruufka, Mac, Windows, iyo Android.
Liistada howlaha si fudud loo heli karo
Diyaar u ah in lala wadaago shaqsiyaadka ama kooxaha
U samee qoraalo hawl gaar ah
Liiska ku dar koox koox si aad u fiican u abaabulid
Maxaa dhacaya haddii aad ula dhaqmi kartid hawlahaaga sida ciyaar oo aad dhammaystirto adigoo dhammaystiraya heerar kala duwan oo ciyaarta ah? Hagaag markaa Habitica waa jawaabta. Waa barnaamij liistada ugu waxqabadka badan ee wax qabashada laga heli karo Google Play Store.
Hibitica waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku abuurto avatar u gaar ah naftaada barnaamijka dhexdiisa. Markaad dhammaystirto howlaha barnaamijka, heerarkaagu way kordhayaan oo waxaad helaysaa hub cusub, xayawaan rabaayad ah iyo ergooyin. Appku wuxuu kugu dhiirigelinayaa inaad ku dhammayso hawlahaaga hab is-dhexgal ah oo u gaar ah waxayna u adeegi kartaa mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee Wunderlist.
Qiimo – Bilaash oo leh astaamo xaddidan, rukumada Rs 340 bishii iyo Rs 3, 250 sanadkii
Abuur oo la soco hawlaha kujira barnaamijka
Samee heerar kala duwan oo dhib ah howlaha kala duwan
Ku dar xusuusinta howlaha
Abuur oo dhammaystirta hawl maalmeedka si aad u kasbato abaalmarinno ciyaar-gudaha ah
Iyada oo in ka badan 20 milyan oo la soo dejinayo ah Google Play Store, Todoist wuxuu u taagan yahay mid ka mid ah beddelka ugu kalsoon ee Wunderlist. Waxay u oggolaaneysaa dadka isticmaala inay abuuraan howlo ayna u habeeyaan si waafaqsan heerka mudnaanta.
Isticmaalayaasha ayaa waliba raadraaci kara horumarkooda barnaamijkan. Qeybta ugu wanaagsan ee Todoist waa in dadka isticmaala ay dhexgalaan barnaamijyadooda ay jecel yihiin sida Google Calendar, Amazon Alexa, Gmail iyo Slack.
Codsigan, waxaad sidoo kale ku abuuri kartaa caadooyin aad raacdo ama kuwa aad rabto inaad uga tagto iyada oo xusuusinta soo noqnoqoneysa ee ku saleysan xilliyada la soo xulay. Tusaale ahaan, waxaad abuuri kartaa caado loo yaqaan jimnaastikada oo aad dejiso xusuusinta soo noqnoqda sida Isniin kasta oo isniin ah.
Qiimo – Nooca aasaasiga ah ee bilaashka ah, nooca lacag bixinta ah ee laga heli karo Rs 339 bishii iyo Rs 3108 sanadkii
Si fudud ayey ula jaan qaadi kartaa aaladaha sida casriga, saacadaha iyo kiniiniyada
Foomamka la diyaarin karo iyo liisaska
Himilo Raad-raac si aad ula socoto oo aad u maamusho qorshayaashaada
Aaladaha xusuusin ku saleysan ee ogeysiinta Smart-ka ah oo ay la socdaan adeegyada xusuusiyeyaasha ku saleysan ee meesha ku saleysan
Iyada oo leh qiimeyn 4.6 ah oo ka socota 5 iyo in ka badan 5 milyan oo la soo dejinayo, ClevNote ayaa ka dhex muuqda dadka sababtoo ah fikradeeda gaarka ah.
Liistada liistadaani waxa ay leedahay faylal kaladuwan oo adeegsadayaashu ku keydin karaan liisas kaladuwan sida raashinka, aqoonsiyada websaydhada, maalmaha dhalashada, akoonnada bangiga iyo liistada guud ee qoraalka qoraalka.
Sidan, liistooyinka ayaa habaysan oo habaysan oo waligood jahwareer uma abuuraan isticmaaleyaasha. Qeybta ugu wanaagsan ee ClevNote ayaa ah inaad sidoo kale ilaalin karto liis leh lambarka sirta ah haddii ay ku jiraan macluumaad qarsoodi ah.
Qiimo – Nooca aasaasiga ah ee bilaashka ah, nooca lacag bixinta ee la heli karo Rs 420
Waxay taageertaa astaamaha
ClevNote sidoo kale waxay la imaanaysaa shaqo xusuusin ah oo loogu talagalay howlaha
Dib u celin kara oo soo celin kara Google Drive
Ka ilaali macluumaadka sirta ah mid xafidan
Hawlaha waxaa loo tixraaci karaa liiska liiska ugu quruxda badan uguna fudud ee laga heli karo dukaanka Google Play. Isticmaalayaashu waxay awoodaan inay codeeyaan midab-nambar liisaska lagu abuuray barnaamijka oo ay ku maareeyaan liistooyinka iyagoo jiidaya ama riixaya.
Waxaad ku dhejin kartaa xusuusiyeyaal hawsha loo maleynaayo inay soo gudbiyaan waqti cayiman. Qaybta ugu wanaagsan ee dalabka waa in ay soo bandhigto ogeysiisyo la qaban karo, waxaad si fudud u calaamadayn kartaa hawl la qabtay ama dib u dhigidi kartaa sida aad u kala jeceshahay. Waxaad sidoo kale dejisan kartaa sida badan ee ogeysiinta ay u soo celiso.
Qiimo – Nooca aasaasiga ah ee bilaashka ah, nooca nooca ‘Premium’ ah oo loo heli karo Rs 80 bishii iyo Rs 800 sanadkii
Ogeysiisyo laqaban karo
Koodhadhka midabka ee liisaska kala duwan
La wadaag howlaha iyo wax-qabadyada asxaabta, qoyska iyo asxaabtaada.
Qoraallo gaagaaban iyo hawlo dhakhso leh ayaa la abuuri karaa
7. Zenkit In La Sameeyo
Zenkit waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu caansan ee loo yaqaan ‘Wunderlist’, maadaama ay leedahay muuqaal aad u fudud laakiin is-dhexgal ah. Waxay u oggolaaneysaa isticmaaleha inuu maareeyo dhammaan macluumaadka sida faahfaahinta macaamiisha, qaansheegyada, howlaha, dukumiintiyada muhiimka ah iyo waxyaabo kale oo hal meel ah.
Isticmaalayaasha waxay sidoo kale ka abuuri karaan goobo caadooyin ah Zenkit si ay ula socdaan xogta iyadoo loo eegayo mudnaantooda. Qaybta ugu wanaagsan ee barnaamijka liiska hawsha ayaa ah inaad la wadaagi karto dukumiintiyo muhiim ah kooxdaada adoo raacinaya, dib u eegaya oo ka jawaabaya sidoo kale tilmaamaha. Isticmaalayaasha ayaa waliba la socon kara howlahooda inta ay qadka u jiraan.
Qiimo – Qorshe shaqsiyeed oo bilaash ah, inbadan qorshe la heli karo ee Doolarka Maraykanka ah 9 bishii iyo qorshe ganacsi oo diyaar u ah USD 25 bishii.
Isticmaalayaashu waxay abuuri karaan xog ururin
Muuqaal khaas ah oo ku saabsan guddiga Kanban
Xirmooyin kala duwan sida kalandarka, kooxdayda iyo kuwa aan ugu jecel nahay
Qaabka shaxda Gantt
La soco abaabulka barnaamijyada liistada ugu wanaagsan ee la sameeyo
Waxaad ka dooran kartaa liistada barnaamijyada waxqabadka ugu wanaagsan ee aan kor ku soo sheegnay si aad u kordhiso wax soo saarkaaga oo aad u habeyso shaqadaada. Codsiyadaani waxay waliba kaa caawin karaan abaabulka, wadaagida xogta, iyo maamulka kooxdaada.
Waxaan si joogto ah u cusbooneysiin doonnaa liistada waxaanan ku dari doonnaa codsiyo wax soo saar leh liistada hawsha, sidaa darteed si joogto ah u hubi meeshan. Intaas waxaa sii dheer, waxaad ku dhaafi kartaa fikradahaaga faallooyinka ku saabsan mid ka mid ah codsiyada la soo sheegay ama haddii aan wax uun seegnay.